Imeya nozime wokugubha inkululeko | News24
Imeya nozime wokugubha inkululeko
IMEYA yoMasipala uMsunduzi uMnu Themba Njilo uhlele uzime wokugubha iminyaka engama-25 izwe laseNingizimu Afrika.
Lo mncintiswano kazime owethiwe ngokuthi uMiss Democracy uzoba seCity Hall ngoLwesihlanu mhla zili-12 kuMbasa (April) ngehora lesihlanu ntambama (5pm).
Ukungenela lomncintiswano u-R100 umuntu ngamunye kanti izintokazi ezivumeleke ukungena eziphakathi kweminyaka eli-18 kuya kwengama-25.
Ngokusho kukaMeya uNjilo inhloso yalozime akusikona nje kuphela ukugubha iminyaka engama-25 kuphela kwaba khona inkululeko kodwa ukunikeza intsha esencane ithuba lokuba ikhulume ngezinkinga eziyithinta ngqo njengabantu abazalwa sebekhululekile.
“Sifuna ukuhlanganisa intsha ikhulume ngezinkinga ebhekene nazo iphinde ithole ithuba lokuthola ukuthi ingahlomula kanjani kwezamabhizini.Bazophinde baxoxisane nobuholi besifundazwe ngezinselelo abanazo baphinde baveze amasu abanawo okuhlomulisa intsha.
“Sigqugquzela abantu abasha ukuba bazi ngokuphathwa kwezwe. Sifuna bangazitheli ngabandayo uma kuza ngasezinkingeni ezibathinta ngqo,” kubeka yena.
IMeya ithe umuntu odle umhlanganiso kulozime uzothola ithikithi lokuthi ahamba yena nomndeni wakhe aye kunoma iyiphi indawo yokungcebeleka(holiday resort) ezokhethwa uyena, kanti nabanye abazowina nabo bazothola eyabo imiklomelo ehlukile.
Ukungena kulomcimbi u-R100. Ngemininingwane eminye ungashayela lenombolo : 079 964 5095.